Bit By Bit - Running kuedza - 4.6 Advice
Zvingave iwe uri kuita zvinhu iwe pachako kana kushanda nemumwe wako, ndinoda kupa zvikamu zvina zvezano randakawana zvakanyanya mubasa mubasa rangu. Nhengo mbiri dzokutanga dzezano dzinoshanda kune chero kuedza, asi yechipiri maviri inonyanya kujekesa kudivi-yemakore ekuedza.
Mazano angu okutanga pane iwe uri kuedza kuedza ndeyekuti iwe unofanira kufungidzira zvakanyanya sezvinobvira kusati kwawanikwa deta. Izvi zvinoratidzika sezviri pachena kune vatsvakurudzi vaiwanzoedza kuedza kuedza, asi zvakakosha kune avo vanojaira kushanda nemamwe makuru makuru (ona chitsauko 2). Nezvinyorwa zvakadaro zvakawanda zvebasa zvinoitwa mushure mokunge iwe uine deta, asi kuedza kunopesana: zvizhinji zvebasa rinofanira kuitwa musati matora deta. Imwe yenzira dzakanakisisa dzekumanikidzira kunyatsofungisisa usati waunganidza deta ndeyekugadzira nekunyora hurongwa hwekugadzirira kushandiswa kwaunoita iwe unonyatsotsanangura kuongorora kwauchazoita (Schulz et al. 2010; Gerber et al. 2014; Simmons, Nelson, and Simonsohn 2011; Lin and Green 2016) .
Chikamu changu chechipiri chezano rakakwana ndechokuti hapana chiitiko chimwe chete chichava chakakwana, uye, nokuda kweizvozvo, iwe unofanira kufungidzira kugadzira mutsva wezviedzo zvinotsigirana. Ndanzwa izvi zvichitsanangurwa seurongwa hwe armada ; panzvimbo yekuedza kuvaka imwe bhomba yehondo, unofanira kuvaka zvikepe zviduku zvakawanda zvine simba rinowedzera. Izvozvi zvidzidzo zvezviongorori zvakasiyana-siyana zvinowanzoitika mune zvepfungwa, asi dzinowanikwa kune dzimwe nzvimbo. Nenzira yakanaka, kudhura kwakaderera kweimwe shanduro dzejedi kunobatsira zvidzidzo zvakasiyana-siyana kuti zvive nyore.
Zvichibva mumamiriro ezvinhu akadai, ini zvino ndinoda kupa zvikamu zviviri zvezano zvinonyanya kujekesa kugadzira dhigirii yemakore: kuumba zero data yakasiyana-siyana (chikamu 4.6.1) uye kuvaka maitiro mumagadziro ako (chikamu 4.6.2).